Mpempe akwụkwọ Cemented - Divenland
Mgbakwunye Akwụkwọ Ahụaja Ọhụrụ
Ọ na-ezo aka na mpempe prefabricated maka akụkụ nke anaghị ebu ibu na-ebu ibu nke ụlọ ọrụ na ụlọ ndị nkịtị nke ihe ndị dị mfe ma ọ bụ ihe owuwu, ya na mgbịrịgba na tenon na nkwonkwo akụkụ abụọ na elu njupụta adịghị elu karịa ọkọlọtọ uru (90 kg / m2: mbadamba 90; 110 n'arọ / m2: 120 mbadamba), na akụrụngwa eji eme ihe ga-agbaso G / T169-2005 standard.Our's mebere cellulose ether na latex ntụ ntụ maka ubi nke ogwe ọhụrụ dị fechaa. . Igwe nke ogwe ya na-eme ka o nwee ike ike na mmanye di elu. Ọ na - eme ka ahihia dị mma ma na - agbachi bọọdụ ahụ ma rụchaa ya. Ọ bụ nhọrọ mbụ nke kọbọd dị fechaa na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ fechaa.
FS na-adịgide adịgide mejupụtara mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ n'ime usoro ihe mkpuchi ihe
Okpomọkụ nchedo nke CONCRETE
FS na –eme ka ihe eji eme ihe bu ihe ozo ma obu ihe eji eme ya bu ihe eji eme mkpuchi ulo dika ihe eji eme ya. Uring gbanye ihe dị n’ime, na-azọpịa ihe mgbochi mkpuchi nke ngwa agha dị na mpụga, ma jisie ike na-ejikọ ọrụ mkpuchi okpukpu abụọ na ngwongwo site na njikọta. Na ntinye nke usoro ihe mkpuchi nke ikuku. Usoro a bụ nke nkedo a na-eme ka usoro ihe mkpuchi mkpuchi mejupụtara, nke metụtara ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ obodo, usoro mgbidi mgbidi nke ihe arụ ọrụ dị n'ime ya dịka mgbidi mpụga, ogidi na ogidi.
New mejupụtara onwe-egbochi ihe mgbochi
EGO usoro usoro eji arụ ọrụ
A na-ejikọ ihe mgbochi ndị na-ekpuchi onwe ha na-emepụta ihe dị iche iche, ihe mkpuchi mkpuchi mkpuchi dị n'èzí, ihe mkpuchi ihe mkpuchi ọkụ, ihe mkpuchi nchebe na mkpuchi njikọ njikọ. N'etiti mgbidi dị n'ime na mpụga nke ngọngọ ahụ, n'etiti etiti ahụ na mkpuchi mkpuchi nchebe, bụ site na "L-shaped T-point haɗin ọgịrịga" na "site na mkpuchi mkpuchi". A jikọtara "ihe ntụtụ" n'ozuzu ya, a na-etinyekwa wires nchara na ntụtụ ahụ. N'okpuru ebumnuche iji hụ na nchekwa, ọ nwere ike belata mmetụta mmiri oyi na-arụ ma nwee arụmọrụ mkpuchi mkpuchi kachasị mma.
1 performance Nrụ ọrụ mkpuchi ọkụ kachasị mma na ọnụego arụmọrụ ọnụego.
2, na-ebelata ọgbọ nke mgbidi mgbidi na mgbawa, na-eme ka ogo oru ngo a ka mma
3, Were ihe maserry tinyekwuo ike